Ugu yaraan saddex qof oo ku dhaawacmay kadib markii dablay ay bumbo gacmeed ku tuureen maxkamada degmada Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandUgu yaraan saddex qof oo ku dhaawacmay kadib markii dablay ay bumbo gacmeed ku tuureen maxkamada degmada Boosaaso
Magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. [Xigashada Sawirka: Maxamed Daahir Caynsane/sawir-qaade madax-banaan]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhaawacmay kadib markii kooxo hubaysan ay bumbo gacmeed ku tuureen maxkamada degmada ee magaalada Boosaaso maanta oo Sabti ah,sida ay goobjoogayaashu u sheegeen warsidaha Puntland Mirror.
Dadka dhaawacmay ayaa loola cararay isbitaalada kuyaala gudaha magaalada.
Dhammaan dadka dhaawacmay ayaa u badan dad rayid ah, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka.
Ma jirto cid sheegatay masuuliyada weerarkaas dhacay maanta oo Sabti ah.